कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका १४ सशस्त्र प्रहरी क्‍वारेन्टाइनमा- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
ट्युबबाट महाकाली तरेर आएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएपछि १४ सशस्त्र प्रहरीसहित १७ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ
चैत्र २३, २०७६ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका १४ सशस्त्र प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । महाकाली अस्पतालले आइतबार १४ जना सशस्त्र प्रहरीसहित १७ जनाको स्वाब संकलन गरेको छ।
भारत उत्तराखण्डको लुहाघाटबाट आएका कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका ती संक्रमित टनकपुरबाट ट्युबमा महाकाली तरेर भीमदत्त नगरपालिका-९ खल्ला पुगेका थिए। खल्लाबाटै उनीसहित ११ जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जाँचपछि बेदकोटकै सुन्दरपुरस्थित क्वारेन्टाइनमा राखेको हो।
नियन्त्रणमा लिने सुरक्षाकर्मीको टोली र उनीहरुलाई बोक्ने सवारी चालक, सहचालक र मालिकको स्वाब संकलन गरिएको महाकाली अस्पतालका डा. सरोज आचार्यले जानकारी दिए। उनीहरुमा कुनै लक्षण भने देखिएको छैन। सम्पर्क भएकै कारण परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको हो।
सशस्त्र प्रहरीको ३५ नं. गणका एसपी वीरसिंह साहुले ट्युबमा तार्ने व्यक्तिको पनि पहिचान भइसकेको र खोजी भइरहेको बताए। आइतबार स्वाब संकलन गरिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य तीन जना क्वारेन्टाइनमा रहने साहुले बताए।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १९:२५
निर्माणाधिन जलविद्युत्‌को काम सुरु
सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गर्न दिने र सामाजिक दूरी कायम गरी निर्माण कार्य सुचारु गर्न निर्देशन दिएपछि प्रवर्द्धकले आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको हो
चैत्र २३, २०७६ आश गुरुङ
लमजुङ — कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र सरकारको लकडाउनले बन्द निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना तंग्रिन थालेका छन् । केही आयोजनाका निर्माण कार्य आंशिक रुपमा सुरु भएको छ ।
झण्डै दुई साता बन्द आयोजनाको निर्माण कार्य पूर्णरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका केही आयोजनालाई सक्नुपर्ने दबाब छ । यस बर्ष नसक्ने आयोजनालाई वर्षायामको बाढीपहिरोबाट जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ । जलविद्युतमा कार्यरत मजदुरमध्ये केही घर गइसकेको अवस्थामै आयोजनाले निर्माण सुरु गरेका हुन् ।
सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गर्न दिने र सामाजिक दुरी कायम गरी निर्माण कार्य सुचारु गर्न निर्देशन दिए पछि प्रवर्द्धकले आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधिन पाँच आयोजनाका लागि दोर्दी गाउॅपालिकाले सर्त राखेर अघि बढाउन भनेपछि प्रवर्द्धकले निर्माणकार्य सुचारु गरेको छ ।
गाउॅपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङका अनुसार सरकारले लागु गरेको लकडाउनका सबै सावधानी पालना गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन भनिएको छ । बढीमा १५/१५ जनाको समूहमा तीन/तीन मिटरको दुरीमा रहेर काम गर्नुपर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष र सरोकारवालाको उपस्थितिमा कार्य क्षेत्र तोकेर निषेधित क्षेत्रको सूचना टाास्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
उपाध्यक्ष दीलबहादुर घलेका अनुसार निर्माणक्षेत्रभित्र तोकिएको कर्मचारी तथा कामदार बाहेक अन्यँलाई प्रवेश रोक लगाउने र कामदारले तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने, कर्मचारी तथा कामदारको आवास र खानाको व्यवस्था तोकिएको क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने सर्त पनि छ । सर्तअनुसार अन्य बजार, बस्ती तथा गाउामा जान पाइने छैन । क्वारेन्टाइनमा बसेर १४ दिन पूरा गरिसकेका कर्मचारी र कामदार बाहेकलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
कोरोना (कोभिड १९) को सन्त्राससंँगै सरकारले लकडाउन गरेपछि निर्माणाधिन नौ वटै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो । नौ वटा जलविद्युतको कूल क्षमता २ सय २ दशमलव १७ मेगावाट छ । दोर्दी करिडोरमा सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना ‘ख’ र माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ संगै २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजना, १२ मेगावाटको दोर्दी–१ र ४ मेगावाटको माथिल्लो छन्दीखोला जलविद्युतको निर्माण रोकिएका छन् ।
मर्स्याङदी करिडोरमा ४० दशमलव २७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजना, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजना र २ दशमलव ४ मेगावाटको अपर स्याागे जलविद्युत, मिदिमखोलामा निर्माणाधिन ७ दशमलव ५ मेगावाटको मिदिमखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य बन्द थियो । अधिकांश आयोजनाको काम सुरु भइसकेको छ ।
माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र वस्तीले ड्याम र टनेलमा निर्माण सुरु गरिएको बताए । ‘पावरहाउमा कामदार लाने/ल्याउने समस्याले अघि बढ्न सकेको छैन’ उनले भने । २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को निर्माणकार्य ९७ प्रतिशत सकिएको छ । यही चैतमा निर्माण सक्ने भनिएको उक्त आयोजना तोकिएको समयमा नसक्ने भएको छ । ‘राम्ररी काम गर्न पाएमा एक महिनामा हामी सक्छौं’ उनले भने, ‘तर, वातावरण अहिले यस्तै छ ।’
५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना ‘ख’ का प्रवन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीले ‘प्रोटेक्सन’ को काम सुरु गरेको बताए । ‘कामदारको मनस्थित घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । बर्खा लाग्न लाग्यो । भएको संरचनालाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ लागेका छौं’ उनले भने ।
आयोजनाको ८५ प्रतिशत सकिएको छ । २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक गुरुप्रसाद ढकालका अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सूचारु हुने क्रममा छ । ‘पावरहाउसमा मेशिनरी सामान जडान गर्नुपर्नेछ । यो बर्खाअगावै सक्नुपर्छ । मर्स्याङदीको भर छैन’ उनले भने, ‘यसअघि बनेको आयोजनाले पानी छोडेपछि सिधै पावरहाउसमा आउछ । पस्यो भने त दसौं करोडको नोक्सान हुन्छ । त्यसैले अघि बढाउनुपर्ने छ ।’ उनका अनुसार आयोजना ९० प्रतिशत सकिएको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइाले आयोजनो निर्माण कार्य रोकिन नहुने बताए । ‘करोडौं, अरबौं लगानीका निर्माणलाई रोक्दा यसले आर्थिक भार थपिन्छ । बरु सुरक्षित रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाउा भनेर पहल गरेका छौं’ उनले भने, ‘बरु निर्माण क्षेत्रमा स्थानीयले गर्ने अवरोधले समस्या बनाउने गर्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
उनले बन्द भएका आयोजना सुचारु हुने क्रममा रहेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काका अनुसार लमजुङका निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढेको बताए । ‘भीडभाड गर्न भएन । काम गर्ने वातावरण तय गरेर आयोजना संचालन गर्न भनेका छौं’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १९:२१